Git Sangit News » छालाको क्यान्सरको जोखिमबाट , कसरी बच्ने ? जानिराखौ,
छालाको क्यान्सरको जोखिमबाट , कसरी बच्ने ? जानिराखौ,
आजभोलि धेरैलाई छालाको क्यान्सरले सताइरहेको छ । कतिपय असावधानी वा बेवास्ताले छालाको क्यान्सर जटिल चरणमा पुग्न सक्छ । तपाईं/हामीलाई थाहा छ, क्यान्सरको सुरुवाती अवस्थामा उपचार संभव छ । तर, जटिल अवस्थामा पुगेपछि उपचार खर्चालु मात्र होइन, असंभव पनि हुनसक्छ ।
घाममा धेरै समय विताएमा, परिवारमा कसैलाई छालाको क्यान्सर भएमा, शरीर तथा छालामा अत्याधिक कोठी भएमा, छाला संवेदनशील भएमा, घाममा बस्दा छाला पोलेमा वा छालामा कत्ला परेमा, छाला, आँखा तथा कपालको रङ्ग हल्का भएमा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई छालाको क्यान्सर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ ।
जोखिमबाट बच्ने तरिकाहरु यस प्रकार छन?
१) विहान दश बजेदेखि बेलुकी चार बजेसम्मको घामबाट बच्ने ।
२) सूर्यको हानिकारक किरणबाट बच्न शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने ।
३) घरबाट बाहिर निस्कदाँ जहिले पनि १५ वा सो भन्दा धेरै एसपीएस भएको सन्सक्रिमको प्रयोग गर्ने । र, बोतलमा उल्लेख गरेको निर्देश अनुसार पुन प्रयोग गर्ने ।
4) छालाको क्यान्सरको लक्षणबारे जानकारी राख्ने ।
5) प्रत्येक महिना छालाको जाँच गर्ने । छालामा कुनै पनि बदलाव देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्ने ।
यसको उपचारमा छालाबाट क्यान्सर भएको छालाको सम्भावित टिस्यूलाई हटाउन सकिन्छ । यसको लागि चिकित्सकको परामर्शमा बायोप्सी जाँचको लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिन्छ । यदी छालाको क्यान्सर भएको पत्ता लागेमा यसको उपचार रेडियो थेरापी तथा किमोथेरापीमार्फत गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार ०९:१५